Ereyo uu Abwaan Hadraawi ku sifeeyay Marxuum Cali Sugulle: Qallinkii Maxamed Saleebaan Cumar
“Gabyaaga Soomaalida kee baad suugaantiisa ugu jeceshahay? Keebaad se ugu neceb tahay? Heesaaga se kee ayaad ugu jeceshahay?” Su’aashani waxay ka mid ahayd weyddiimmo door ah oo Abwaan Maxamed Ibraahin Warsame “Hadraawi” lagu weyddiiyay kulan-suugaaneed uu 26 sanno ka hor, badhtamihii 1990kii, ku qabtay dalka Norway.
Abwaanku isaga oo su’aashaas iyo su’aalo kale ba ka jawaabaya xilligaa waxa uu yidhi:
“Gabyaagu wax kale kuma kala duwana ee wuxu ku kala duwan yahay meelaha wax laga odhanayo. Waxa laga yaabaa aniga in la igaga fiican yahay sida adiga oo ujeeddadii sheegaya midho yar oo khafiifa oo la wada garan karo loo adeegsado. Waxa laga yaabaa inaan anigu waxa aan sheegayo ereyo culus u adeegsado, taasna dhaawaceedu uu noqdo in aanay dadku wada helin.
Matalan Cali Sugulle waxa uu caan ku yahay in ujeeddadii aan anigu ereyada culus ku idhi uu u adeegsado ereyo yaryar oo fudfudud oo khafiif ah oo xataa carruurta yaryari fahmi karto. Waxaan xusuustaa Cali Sugulle oo doonaya inuu dadka wax u sheego. Waa guubaabo, waa wax u sheegid, waa toosin, waa baraarujin. Laakiin sida uu u sheegayo ayaa layaab leh. Waa wakhti sonkor waddanka laga waayay, oo hooyadii rafaadday, oo kuyuu la galay, oo aad loo dhibtooday. Cali Sugulle dareenkaasuu arkay, waxaanu doonayaa inuu wax u sheego dawladdii meesha ka jirtay. Deetana waxa uu yidhi:
“Siyaadow sonkor ma leh.
Hooyadii sacab ma leh.
Guulwadihii salaan ma leh.”
SubmitBal hadda u fiirso ereyada uu isticmaalayo. Anigu haddaan is idhaa ujeeddadaa wax ka dheh, waxa laga yaabaa ereyo intaa ka adag in aan u adeegsado, deetana fahamkii dadka qaar ku adkaado. Waxaan xusuustaa markii Cali Sugulle heestaa tiriyay, saacado yar kadib carruurtii oo dhami way ku hadaaqayeen.”
“Badiba su’aalaha caynkan ah waa lagu mergadaa. Anigu se waxaan jecelahay inaan ka badheedho. Badiba qofka la weyddiiyaa wuu iska afgobaadsadaa oo wixii wuxu ka dhigaa wax caam ah. Badiba way adag tahay inuu yidhaahdo hebel ama heblaayo ayaan ugu jecelahay. Laakiin xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan qof waliba qof buu dhegaystaa oo u suntan. Mana jirto oo lama odhan karo qof baa la wada jecel yahay. Yacnii nin dadka oo dhan wada lihi ma jiro. Laakiin qof waliba dookh ayuu leeyahay oo hebel heestiisa ama heblaayo heesteeda waxa laga yaabaa inuu ka jecel yahay hebel ama heblaayo kale. Gabyaaguna waa la mid.
Suugaan aan dhegaysto waxa aan ugu necebahay suugaanta aan anigu halabuuray. Haddii meel lagu dhegaysanayo aan soo galo, waxaan jecelahay in la bakhtiiyo. Laakiin waan jecelahay in aan dhegaysto suugaan rag kale leeyahay ama hees ay gabadh cod macaani qaadayso. Weliba ragga codkiisa ma jecli ee gabdhaha ayaan anigu aad u jecelahay.
Ragga wax halabuura, rag badan oo aan jecelahay ayaa jira. Anigu marka ay suugaan tahay, ama waddani ha noqoto ama wax kale ha ka hadlayso e, rag badan baa ku tartamaya oo ninna aanu nin ka dhicin. Gaarriye ayaa jira, Cabdi-Qays baa jira, Cali Sugulle ayaa jira, Cabdi Iidaan baa jiray, Xasan Ganey, Xuseen Aw Faarax, Maxamed Cali Kaariye iyo qaar kale oo badan… iyo qaar kale oo badan.
SubmitLaakiin aniga suugaanta i shidda ee aan in aanay wax kale igaga khaldamin runtii waa Cali Sugulle iyo Cabdi Iidaan. Hore na waan u sheegay, oo warbaahin i waraysatay sidaas ayaan ugu jawaabay. (Weedhsan) Sidaas qayaxan ee cad ee dadku ka dhawrsadaan, inay cabbiraan oo muujiyaan. Waayo, badiba dadka su’aasha caynkan oo kale ah ka jawaabayaa godob bay u qaataan haddii ay yidhaahdaan anigu hebel ama heblaayo ayaan codkiisa/codkeeda jecelahay. Laakiin wax kastaa ha igu seegaane aniga badheedhahaygu waa sidaa.
Raggaa aan tiriyay oo dhan waan jeclahay suugaantooda, laakiin labada aniga ii goonnida ahi waa Cali Sugulle iyo Cabdi Iidaan.
Heesaaga: Gabdhaha sow maaha? Magool baa jirta, Maandeeq baa jirta, Sahra Axmed baa jirta, Khadra Daahir baa jirta, Faadumo Qaasim baa jirta, Hibo Maxamed baa jirta; hablahaa codkooda aad baan u jecelahay. Intaa aan idiin tiriyay oo dhan aad iyo aad baan u jecelahay. Laakiin haddana gabadha iiga sii soocani waa Faadumo Cabdillaahi Kaahin “Maandeeq”.
Previous: “Badhasabaaka Sanaag Waxaad Moodaa Inuu Degdegayo” Liibaan Maaweel
Next: Xukuumadda iyo Xal U Helida Sicir Bararka